Iklayenti elihlukumezayo | Martech Zone
Ngiyaqiniseka ukuthi wonke umuntu unolunye lwalezi zinhlobo zamakhasimende. Ngibusiswe ngempela kule minyaka eyishumi edlule engibe namakhasimende akuthokozele kakhulu ukusebenza nami. Ngibonile ukuthi ezinye izinkampani ziphatha kanjani amaklayenti azo futhi ngiyakuzonda. Bengihlala njalo ngiqonde ezingeni eliphezulu lenkonzo. Ngithembise ngokweqile NGENZE ngokweqile. Kepha, geesh… lelo khasimende elilodwa… ukube bengingalibhalela incwadi kuphela…
Iklayenti elihlukumezayo elithandekayo,
Emuva ngenkathi usikhetha njengomthengisi wakho, ubuze imibuzo eminingi futhi wasidonsela ngokungenasihawu emakhilomitha we-red tape ngaphambili wena sinqume ukuthi besingumkhiqizo ofanele wena. Manje njengoba ususikhethile, akulona iphutha lethu ukuthi manje awuneme ngezici kanye nokusebenza esikubonise kona futhi wakuthanda. Asizange siqambe amanga. Asizange sikhulume kabi. Nguwe owashintsha umqondo wakho.
Sizoqhubeka nokuziqhenya ngokuthi sihlangane no-100% yakho izidingo futhi kudlule konke yakho umnqamulajuqu. Leso kwakuyisithembiso esasenza kuwe futhi sasigcina.
Ngaphandle kokukholelwa kukho, ukugxila kwethu hhayi ekuqedeni ibhizinisi lakho. Inhloso yethu ukuqhubeka nokwakha izixazululo ezinkulu emhlabeni. Siyazi ukuthi sidlula bonke abanye abathengisi kuzici, ukungaguquguquki, ukusebenziseka, futhi sinezendlalelo eziningi zezimo ezingajwayelekile kunanoma iyiphi enye inkampani.
Ngenkathi izimbangi zethu zingalethi ama-imeyili noma izinombolo zocingo kuwe, sethule umsebenzi wethu ngamunye kuwe uqobo, sakunikeza imininingwane yethu ephelele yokuxhumana, futhi sathola ukwesekwa komuntu siqu okungu-24/7. Inhloso yalokhu akukhona ukukunikeza indlela yokuthi usilulaze, ikhona ngoba sikukhathalela, inkampani yakho namakhasimende akho.
Wonke amaklayenti ayinto yethu yokuqala engu- # 1. Yize lokho kungabonakala kungamukeleki uma usebenzisa imali ethe xaxa nathi, uzokuthokozela lapho abanye bechitha imali eningi kakhulu kunathi.
Sihlala sihlola izitayela embonini, ubuchwepheshe, kanye nesisekelo sabathengi ngakho-ke akudingeki. Lokhu kusinikeza imibono yamasu kanye nokusalela emuva kwemikhiqizo yezici nokuthuthuka okungaphezulu konyaka olandelayo. Ngokuphikisana nenkolelo evamile, asihlali kusofa sidlala iWorld of Warcraft futhi silinde isikhalazo esilandelayo. Siyasebenza, siyatshala imali, futhi sikhiqiza intuthuko nsuku zonke. Sinohlelo lwethu lokusebenza endaweni. Izimfuno zakho zokukhishwa ngokushesha kwesici esisha zinemiphumela ezinhlelweni esivele sisebenza kuzona nezinhloso esinazo. Yazi ukuthi sizokwenza konke okusemandleni ukubeka izidingo zakho phambi kwabanye - kodwa kuzothatha isikhathi ukulungisa amashejuli, izinhloso kanye nokulindelwe kwawo wonke umuntu osenhlanganweni yethu.
Ukukhalela into ezoqedwa izolo ngeke kuthuthukise ikhwalithi noma ukwethembeka kwalesi sici. Sinezinqubo, ukuhlolwa, kanye nokuqinisekiswa kwekhwalithi endaweni yakho Ukuvikelwa, hhayi eyethu.
Uma, isikhathi ngasinye sikubiza, inhloso yakho kuphela ukusidelela nokusilulaza - ngeke senze konke okusemandleni ethu ukukushayela futhi sikusize wenze ngcono imiphumela yakho yebhizinisi. Asikwazi ukufunda kuwe uma ungasiniki ithuba. Sizoyeka ukwenza konke okusemandleni ethu ukukusiza ngoba sibakhathalele abasebenzi bethu ngokwanele ukuthi asifuni ukubabona behlukunyezwa. Kungcono sichithe isikhathi sethu namakhasimende abona ubuchwepheshe abatshalile kuwo futhi afisa ukusebenzisana nathi ngenhloso efanayo.
Ibhizinisi lethu alikhuli ngokuphindwe kayishumi ngaphezu konyaka ngoba asikwazi futhi asiqondi ukuthi senzani. Siguqula imboni futhi saziwa ngayo. Ushintsho ludinga uthando, izinsizakusebenza nesikhathi. Yiba nesineke kithi futhi awusoze wazisola. Amakhasimende ethu angasebenza nathi noma angalwa nathi, ucabanga ukuthi ngubani ozozuza kakhulu?
Ukugcina abasebenzi bakho bejabule kufakazelwe ukuthi kuthuthukisa ukwethembeka kwabo nokukhiqiza. Ngabe ucabanga ukuthi kwehlukile ngomthengisi wohlelo lwakho lokusebenza?
Umthengisi Ubukhaliphile Ngokwanele Ukukhetha
Tags: Apii-appifierisikhombi sokuhlela ukusebenzab2cukukhuliswajsonukuphathwa kwesithunziukuphumulaisephauhlukanise ukuhlolwatestingimpendulo yomqondo womsebenzisii-wordpress iphonei-wordpress iphone lokusebenzaxml
Amandla Okuhlala: Uzohlala isikhathi esingakanani?
Dec 15, 2007 ngo-7: 28 PM
Ngiyayithanda. Ngingazibiza kabusha izigaba ezimbili zokuqala into enjengale:
“Emuva lapho usikhetha njengomthengisi wakho, ubuze imibuzo eminingi futhi wasidonsela ngokungenaluzwela emakhilomethini ered tape, wasenza sabhala ngokuningiliziwe izibopho zethu hhayi kuze kube yilapho usunesitatimende esiphelele somsebenzi ovumile ukuwenza unquma ukuthi besiyisixazululo esifanele wena.
Manje njengoba ususikhethile, akulona iphutha lethu ukuthi izinkinga zakho zebhizinisi zishintshile futhi manje awuneme ngezici nemisebenzi ebesivumelana ngayo ukuthi zizoxazulula izinkinga njengoba ubuzichaza ngaleso sikhathi. Asizange siqambe amanga. Asizange simelele kabi. Izimo zakho nemvelo yakho kuguqukile.
Manje thina njengeqembu kufanele sihlangane futhi kufanele sigxile kukho
ungasakha kanjani ngokushesha isisombululo esisebenzayo sezinkinga zebhizinisi ezenziwe kabusha …………………
Dec 15, 2007 ngo-9: 05 PM
Ngiyajabula ukuthi uthumele inguqulo ye-PG-13. haha. Ngingathanda ukuthumela okuyishumi nambili kwalokhu kwamanye amaklayenti. Ingabe lokhu kungaphansi kwelayisense yokudala evamile? Indatshana enhle.
Dec 16, 2007 ku-2: 04 AM
Gosh, konke kubonakala kungokoqobo. Cishe ungathi ubusephila ngaleyo ndlela yocingo… '-)
Dec 16, 2007 ku-10: 14 AM
Ama-imeyili nawo asukile eshadini! 🙂
Dec 16, 2007 ku-6: 03 AM
Yebo, benginamakhasimende athile abengajabule lapho ngiphinda kabili imigwaqo nokuthengisa kwabo… ngokuhamba kwesikhathi bese ngikutshela ukuthi bayayazi inkampani evela e-India enikezela ngezivakashi eziyi-1000000 zansuku zonke ngo- $ 25
Dec 17, 2007 ku-8: 59 AM
Yishiyele ku-Ade ukubeka lokhu ku-chunk yekhodi elula elula I-Pseudocoded!